साल्ट ट्रेडिङको साधारण सभा आज, के-के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » साल्ट ट्रेडिङको साधारण सभा आज, के-के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
काठमाडौं - साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको साधारण सभा मंगलबार ११ बजेदेखि सुरु भएको छ । उक्त सभा काठमाडौँको त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा भइरहेको छ । सभामा कम्पनीले २५% बोनस सेयर र १०% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजाँदैछ ।
साधारण सभाले यो प्रस्ताव पारित गरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सभामा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि लैजाने भएको छ ।